ठमेलको फेरियो रुप ! ठमेललाई कुरूप बनाएको गन्जागोल तार हटाइयो – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/ठमेलको फेरियो रुप ! ठमेललाई कुरूप बनाएको गन्जागोल तार हटाइयो
ठमेलको फेरियो रुप ! ठमेललाई कुरूप बनाएको गन्जागोल तार हटाइयो
ठमेललाई नै कुरुप बनाएको तारहरु हटाउने काम धमाधम भैरहेको छ ।पर्यटकीय गन्तव्य स्थल ठमेलमा विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी तथा विद्युत प्रधिकरणका तारहरुले कुरुप वनाएका थिए ।
मंसिर १६ गते काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्रधिकरण, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रतिनिधीबीच छलफल गरी तार काट्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णय अनुसार केही दिन अघि देखि ठमेलका तारहरु काट्न थालिएको हो। ‘यसबारे मंसिर १६ अगाडि देखि नै छलफल भइरहेको थियो ।
ठमेलको सुन्दरता मात्र हराएको थिएन उत्तिकै जोखिम समेत रहदै आएको थियो । ठमेल काठमाडौँको मुख्य गन्तव्यस्थल भएको हुँदा भिजिट नेपाल २०२० लाई लक्षित गरि तर हरु हटाइएको हो । यसरी तार काट्दा करिब ९५ प्रतिशत अनावश्यक तारहरु भेटिएको बताइएको छ।
यो कामबाटअहिले स्थानीयदेखि व्यवसायीहरु समेत खुसी भएका छन्। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले तार काटिएपछि सूचना निकालेर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ठमेल पर्यटन विकास संघले प्रधिकरणसँग छलफल गरेर तार काटेको दावी गरेको छ।
भोलि फागुन १५ गते बिहीबार सार्वजनिक बिदा